China Pse Piperonyl Butoxide PBO na-emepụta ọgwụ ahụhụ dị mma China. | Senton
Semụ ahụhụ Piperonyl Butoxide PBO dị irè
Nodị No.: CAS Mba: 51-03-6
Isi Iyi: Ahụhụ Ahụhụ
Mgbu nke Elu na Ala: Ọrịa na-adịghị ala nke ndị na-akwụ ụgwọ
Ọnọdụ: Ọgwụ Ahụhụ
Mmetụta Toxicological: Omume Pụrụ Iche
Nkwakọ ngwaahịa: 25kg / igba
Arụpụta: 300ton / ọnwa
Gbọ njem: Oke Osimiri, Ikuku
Tụkwasịnụ Ikike: 300ton / ọnwa
HS Usoro: 2932999014
Port: Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai
Ezinaụlọ na-adịghị emerụ piperonyl butoxide (PBO) bu ihe eji eme ihe eji eme ihe Ogwu Ogwuformulations. Ọ bụ waxy ọcha siri ike. Ọ bụ arụ ọrụ Onye mmekorita . Ya bu, n’agbanyeghi na o nweghi oru ogwu nke ya, o na eme ka ikike nke ụfọdụ di nmaọgwụ anwụ dị ka carbamates, pyrethrins, pyrethroids, na Rotenone. Ọ bụ ihe eji emepụta semisynthetic nke safrole.
Aha ngwaahịa PBO
CAS Mba 51-03-6
Chemical usoro C19H30O5
Oke molar 338.438 g / mol
Njupụta 1,05 g / cm3
Isi mmiri 180 ° C (356 ° F; 453 K) na 1 mmHg
ebe mgbari 170 ° C (338 ° F; 443 K)
Solubility: Mmiri anaghị agbaze na mmiri, ma na-agbaze n'ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ gụnyere mmanụ ịnweta na dichlorodifluoro-methane.
Kwụsie ike: Light na ultraviolet ray ufọk ufene, hydrolysis eguzogide, ọ bụghị corrosive.
Mgbu egbu: Oke oke LD50to bu ihe kariri 11500mg / kg Nnukwu onu ogwu LD50to bu 1880mg / kg.Ọdịmma nchekwa dị ogologo oge maka ụmụ nwoke bụ 42ppm.
Jiri:Piperonyl butoxide (PBO) bụ otu n’ime ndị synergist kachasị dị ịrịba ama iji mee ka pesticide dịkwuo irè. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ime ka pesticide dịkwuo elu karịa ugboro iri, mana ọ nwere ike ịgbatị oge ya. A na-ejikarị PBO eme iheọrụ ugbo, ahụike ezinụlọ na nchekwa nchekwa. Ọ bụ naanị ikike dị ikeAhụhụ ejiri ya mee ka nri dị ọcha (mmepụta nri) nke UN Hygiene Organisation.
Mgbe anyị na-arụ ọrụ ngwaahịa a, ụlọ ọrụ anyị ka na-arụ ọrụ na ngwaahịa ndị ọzọ, dị ka Medical Chemical Intermediates, Ofufe Control, Ọgwụ Ahụike, Dinotefuran were gabazie.
Na-achọ ezigbo ụlọ na-adịghị emerụ Piperonly Butoxide Manufacturer & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Niile PyrethroidAhụhụ Synergistna-obi ike mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Workable Synergist Piperonly Butoxide. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Chlorempenthrin 95% TC Ahụhụ Pesti
Pest Control semụ Ahụhụ Transfluthrin
Karịsịa Irè megide Acarids Amitraz
Ethofenprox Ahụhụ Ethephon Agrochemical
Irè nke anwụnta Coils nwere ...
Pyrethroids Ahụhụ Mmekọrịta Piperonyl Bu ...